महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ : डा. कोइराला - Birgunj Sanjalमहन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ : डा. कोइराला - Birgunj Sanjalमहन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ : डा. कोइराला - Birgunj Sanjal
३१ चैत्र २०७७, मंगलवार ०७:१२
वीरगन्ज । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार जति समय रहन्छ, त्यति नै अराजकता बढ्दै जाने बताएका छन् । प्रेस युनियन कास्कीले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कोइरालाले ओली सरकारको विकल्प दिन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए ।